Networking | နည်းပညာပျိုးခင်း
Firmware upgrade on IR809 Router
July 9, 2017 July 9, 2017 Phyo Lwin CISCO, Networking
တလောတုန်းက အလုပ်အတွက် IR809 router ကို firmware upgrade လုပ်ပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုံးမှာပဲ အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ရတာမဟုတ်ဘဲ site ထဲက နေပူပူထဲမှာလုပ်ရတာဆိုတော့ error ကိုတောင် သေချာမဖတ်ဖြစ်တော့ဘဲ upgrade ပဲ ထပ်တလဲလဲ လုပ်မိတယ်။ နောက်ဆုံးမရဘူးဆိုပီး ရုံးကို ပြန်ဖြုတ်လာခဲ့တယ်။ error ကတော့ အောက်က error ပဲ။
%Error copy from scp://*:*@127.1.3.1//vds_system/bundle/ir800-hv.srp.SPA.2.6.23 to bootstrap:ir800-hv.srp.SPA.2.6.23
Make sure SSH source interface is not configured.
Failed to install hypervisor image!
တကယ်တော့ အဲဒါက configuration ထဲမှာ ssh source interface ကို configure လုပ်ထားလို့ပဲ။ အဲဒါကို ဖြုတ်ထားပီးတော့ ပြန်ပြီး upgrade လုပ်လိုက်တာ အဆင်ပြေသွားတယ်။
upgrade လုပ်တဲ့ command ကတော့ အောက်ကအတိုင်းပါပဲ။
router#bundle install flash:(.bin file)
checking UTP cable
November 14, 2016 March 21, 2019 Phyo Lwin CISCO, Networking, Wireless
Switch ကနေ ကေဘယ်ကို ကောင်းမကောင်းသိချင်ရင် အောက်ကကွန်မန်းနဲ့စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
AP ချိတ်ထားတဲ့ switch ကို ဝင်ပြီးတော့ test cable-diagnostics tdr interface gigabitethernet 1/0/24 ဆိုပြီး စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင် result ကိုတော့ အောက်က ကွန်မန်းနဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ ကေဘယ်ကောင်းတယ်လို့ သိနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ ကေဘယ်က မီတာ ၆၀ လောက်ရှိပါတယ်။